वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : November 2009
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ November 29, 2009
जिन्दगी यतिखेर अपरिचित शहरमा आईपुगेको छु, मध्यरातको सूनसान छ, बास मागेर निद्रा बिगारीदिने मन छैन मलाई; म उज्यालोको खोजीमा सडकहरु नापीरहेछु।
(भदौ २७, २०५७; पोखरा)
तिम्रो आकृति लठ्ठिएको मोहक साँझ, झ्यालबाहिरको मोहक संसार, कुनै क्यानभासमा उत्रन तयार छ; म मेरो मनको बुरुशले स्मृति र कल्पनाका रंगहरु घोलेर जताततै तिमीलाई सजाइरहेछु।
(मे २६, २००४)
प्रत्येक दिन‍- अघिल्लो भन्दा उदास लाग्छ, यस्तो लाग्छ जिन्दगी गिलासमा एक पोका चिया छ म हिजो देखि पानी थप्दै पिईरहेछु स्वाभाविक हो- प्रत्येक घुट्की अघिल्लो भन्दा फिका लाग्छ।
(अगष्ट २०, २००६)
मेरो इतिहासका सडक, चोक र गल्लीहरुमा- गजधम्म बाटो छेकेर उभिएका छन् युग-युगका खलनायकहरु, के यो भिड अझै बढ्ने हो?! खै, नायकहरु कहाँ छन्?
(जनवरी १२, २००६)
[दैनिकी अलि भद्रगोल भएको छ अचेल। ब्यस्तताको बीचमा अलि-अलि फूर्सदका 'टापू'हरु नभएका होईनन्, तर 'टापू'हरुकै भरमा नयाँ रचना लेख्न भने नसकिने रहेछ, अलिक धेरैनै फूर्सदिलो मनस्थिति चाहिँदो रहेछ। मलाई 'इतिहासको ब्याज'कै भरमा ब्लग चलाईरहन पटक्कै मन छैन तर तपाईँहरुसंगको कुराकानीलाई निरन्तरता दिन यहि बाहेक अरु बाटो बाँकी देखिएन अहिलेलाई, क्षमाप्रार्थी छु। तपाईँका दिनहरु शुभ रहुन्!]
धेरै भएछ-मन्दिरका घण्टहरुसंगै ब्युँझिएरताजा घाम सिउरेर तालुमापरेवाहरुको माझबाटयो यात्रालाई अघि नबढाएको,मध्यान्हको गाढा छायामादुनियासंग बेखवर भएरआफैसंग बेखवर भएरएउटा मिठो सपना नदेखेको,दिन-रातको दोसाँधमाहल्का सिन्दूर पोतिएको बादलझोलाभरि बोकेरआँगन नटेकेको,धेरै भएछ-धेरै भईसकेछ-कतै लम्पसार परेरआकाशका तारा नगनेको,एउटा तारा रोजेर'त्यो मेरो तारा’ नभनेको।[यो कविता "तृष्णा" शिर्षकमा (र अलि फरक रुपमा) २००७ को अन्त्यताका 'साझा' को कविताको देशमा राखिएको थियो। ब्लगमा समसामयिक विषयमा लेख्ने मन हुँदा-हुँदै पनि नभ्याउनाले आजपनि यो 'इतिहासको ब्याज'ले काम टारें:)]
[आज 'पाहुनाको कोसेली' मा साथी पुरुषोत्तम गौतमजीको संस्मरण राख्न चाहन्छु। २०४५-४७ मा प्रमाणपत्र तहमा अध्ययनरत हुँदा पुरुषोत्तमजीसंग चिनजान भएको हो मेरो। प्रमाणपत्र तह सकिएपछि हाम्रो सम्पर्क टुट्यो र केहि समय पहिला यहि ब्लग र फेसबुकको माध्यमबाट फेरि भेट भयो। उहाँ अहिले पाठशाला नेपाल फाउण्डेशनमा अध्यापनरत हुनुहुन्छ।]
- पुरुषोत्तम गौतम असफलता भन्ने शब्द मूर्खहरूको शब्दकोषमा मात्र पाइन्छ भन्ने नेपोलियनको उक्ति साह्रै मन पर्थ्यो मलाई । म पनि सोच्थेँ मान्छेले गरे नहुने के होला र दुनियाँमा । मन मेरो साह्रै उत्साही थियो । संसार बदल्ने आँट थियो होला त्यो बेला । विद्यार्थी थिएँ म साह्रै मेहेनती जुनसुकै विषयमा पनि । २०४५ सालको एस.एल.सी. पास गरेर पाटन क्याम्पस पढ्न आएँ म । मेरा गु्रूहरूमा फणिन्द्र नेपाल सरलाई अझसम्म भुलेको छैन मैले । माया गरेर सिकाउने जहिले पनि केही खोजी गर्न प्रोत्साहित गर्ने । तिमी गर है भविष्यमा गएर तिमीले नेपालीमा एम. ए . गर्नु पर्छ भनिरहनुहुन्थ्यो मलाई । सरसँग नजानेको कुरा सोधिहाल्ने बानी र नयाँ कुरा खोजी हाल्ने बानीले गर्दा पनि होला माया गरेको । म दुईतिर पढ्थेँ । ललितकलाको पनि म चित्रकला विषयको विद्यार्थी थिएँ । त्यहाँ पनि माया गरेर पढाउने गुरुहरू मनुजबाबु मिश्र, राधेश्याम मुल्मी, नवराज कार्की अरु अरु सरहरू पाएँ मैले । पढ्दा पढ्दै जीवन अलिक कष्टकर बन्यो अनि मैले बाध्यताले पनि र परिस्थितिले पनि एउटा सानो जागिर खानुपर्ने भयो । त्यसैक्रममा बाध्यताबश शिक्षण सम्बन्धी थाहै नपाइ, जान्दै नजानीकन म २०४८ सालमा ललितपुरको चापागाउँस्थित कञ्चन अंग्रेजी बोर्डिङ् स्कूलको प्राथमिक तहको स्थापनाकालको शिक्षक बनेँ थोरै समयका लागि भएपनि । पाटन क्याम्पसमा बि.ए. प्रथम वर्षमा अर्थशास्त्र र गणित मुख्य विषय लिएर पढ्थेँ म । साना केटाकेटीहरूसँग खेल्न रमाउन गाउँ जाँदा पनि मलाई हरहमेशा बाटो देखाइरहन्थे । साँच्चै भन्नुपर्दा साना नानीहरू मेरा अजश्र प्रेरणाका स्रोतहरू हुन् या नि मेरा गुरुहरू हुन् । जीवनले कोल्टे फेर्यो ।
२०४८ सालमा पाटन क्याम्पस पढ्दा पढ्दै म शारीरिक अस्वस्थताका कारणले म गाउँ फर्किएँ । झापा जिल्लाको सुदूर दक्षिणी भागको जुरोपानी गा.वि.स. को ग्वालडुब्बा बजारमा एउटा सानो बोर्डिङ्ग स्कूलको प्रिन्सिपल तथा शिक्षक भएर काम गर्न थालेँ । जीवनले एकोहोरो जीवनगति पायो । साना नानीहरूसँग रमायो दिनभरि अनि घर फर्कियो । सपनामा पनि तिनै अबोध अनुहारहरू । भिन्न भिन्न प्रकृतिका नानीहरू भिन्ना भिन्नै व्यवहारहरू । नेपालको एउटा कुनाको मधेशी बाहुल्य गाउँ थियो त्यो शहरको कुनै आलिशान महल होइन । गाउँकै भलाद्मी काइँला बाजेको घरको टाँढमुनी खर र बाँसले बारेको बन्द कोठा भित्रको त्यो स्कूल गाउँका मान्छेका लागि त एउटा अंग्रेजी माध्यमको स्कूल थियो के के न गर्लान् यी दुइटा ठिटाले भन्ने थियो होला । मसँगै केशब अधिकारी भन्ने साथी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला । जे होस् अहिले सम्झँदा २०४९ सालको पुष महिना थियो, स्थापनाको पहिलो वर्ष जस्तो लाग्छ । स्कूल गौरादहमा रहेको माउन्ट एभरेष्ट मा.वि. को शाखा स्कूलको रुपमा खोलिएको भए पनि म नै प्रिन्सिपल नियुक्त गरिएको थिएँ त्यो बेला । तर हामी दुबैको लागि त्यो क्षेत्रमा चुनौती थियो संस्था चलाउन। २०४८ सालमा नै एउटा स्कूल चलाएर बन्द भइसकेको रहेछ त्यसले गर्दा पनि हामीले धेरै सम्झायौँ अभिभावकहरूलाई । हुन त हामीलाई कसैलाई ठग्नु पनि थिएन ,अर्को स्कूलको शाखा भए पनि हामीले त्यो स्कूललाई कहिल्यै पराया ठानेनौँ, बच्चाहरू अर्काका मानेनौँ । आफ्ना नानीहरू सम्झिएर पढायौँ बढायौँ । बिना तालिमका मास्टर भएपनि धेरै कुरा थाहा पाउँदा बच्चाको भलाइको लागि गरिएछ । शिक्षाको जानकारी थिएन पनि । हामी दुबैजना मानविकी संकायका विद्यार्थी थियौँ बि.ए. पढ्दै । सिकारु थियौँ हरेक कुराका लागि । न तालिम थियो न हामीलाई कसैले सिकाएको नै थियो यसो गर्ने उसो गर्ने भनेर । मेरो कल्पनामा म कुनै दिन शिक्षक बन्छु होला भन्ने थियो होला जस्तो मलाई त्यति लाग्दैन पनि । तर पनि समय सबैको गुरु रहेछ । समयको चक्र सँगसँगै म पनि फनफनी घुमेँ अनि मेरा लक्षहरू पनि घुमे आफैँ तय भए ।
म बोर्डिङ्को एक नम्बरको मास्टर भएँ गौतम सर भएँ । बास्तवमा म कुनै दिन चित्रकलामा बि.एफ.ए. गर्छु भन्ने एउटा झिनो लक्ष भने रहेकै थियो होला जस्ते लाग्छ । तर पनि यसै गर्छु भन्ने पूर्वकिटानी केही थिएन मेरो जीवनको । सानोछँदा भोलि गएर नानी के हुन्छ ? भन्दा मेरो जवाफ म त डाक्टर हुन्छु भन्ने थियो होला अहिले सम्झँदा । तर यो सबै समयको खेला वा भाग्यको खेल म के भनूँ? पढेर ठूलो मान्छे हुनू, मन्त्री हुनू अनि धेरै पैसा कमाउनु र बुबाआमालाई सुखले पाल्नू है भनेर दशैँमा टीका थाप्ने संस्कारमै हुर्किएको मान्छे हुँ म पनि । त्यसमा पनि दशैँमा दिइने आषीक सम्झन्छु म कहिलेकाहीँ —आयूद्रोणसुते श्रीयंचदशरथे सत्यम्च कुन्तीसुते, गतिश्च पवने ..........बलम्च हलधरे ....कीर्तिश्च नारायणे यस्तै यस्तै । संस्कृतको श्लोक त्यति मजाले बुझ्ने मान्छे होइन म । तर पनि सामान्य अर्थ ठम्याउन सक्छु भन्ने लाग्छ मलाई । आषिकले भनेजस्तो न अस्वस्थमाजस्तो अजम्बरी बन्न सकूँला , न यूधिष्टिर जस्तो सत्यवादी, न बलमा बलरामको जति ताकत नै, न कीर्ति नै राख्न सकूँला नारायणको जस्तो । तर पनि म अरु भएर होइन , म आफैँ भएर जिउन बल गर्ने मान्छे हुँ जहिल्यै पनि । आषिक जे जे थापेपनि आफ्नो चाहना जे जे भएपनि सबैले सोचेको पुग्दैन सधैँ । मन्त्री बन्न नसके पनि, अरुलाई गिराएर आफू ठूलो मान्छे हुन नसकेपनि म बोर्डिङ्ग स्कूलको न्यूनबेतनभोगी जागिरे छु म ।
ती दिनहरूतिर फर्किएर हेर्दा-खालखालका नानीहरू, खालखालका विशेषताहरू । साह्रै फोहोरी कुरा बोल्नेदेखि साहै्र भलाद्मीसम्म । कोही गाउँको दूध दही मजाले खाएका छुच्चा बच्चाहरू पनि थिए अरुलाई ठेलेर लडाइदिने खालका पनि । मैले धेरैलाई भन्नु पनि ती साना नानीहरूको बानी बेहोराका बारेमा । घरमा बोलिने भाषा र बानी बेहोराको असर परेको हो कि भन्ने लागेको थियो मलाई । गाउँमा केटाकेटीको फोहोरी बोलीले गर्दा नै बच्चाले फोहोरी बोलेको जवाफ पाएँ मैले । एउटा बच्चा साह्रै पुल्पुलिएको थियो, लुरे थियो तर ऊ साह्रै बल गथ्र्यो स्कुल छोडेर भाग्न । पहिलो दिन थियो उसलाई त्यो स्कुलमा ल्याइएको । जंगली थियो ऊ । छेउकै आँगनमा धान भरेर राखिएका धानका बोराहरू थिए । मान्छेहरूको बराम लागेको थियो हेर्ने । नयाँ नयाँ बोर्डिङ्ग स्कूल खालखालका बच्चा रुने कराउने । अनि ती बच्चाको चर्तिकला हेर्नेको ताँती । मैले सानो फुच्चेलाई आऊ सानो बाबु भनेर के भनेको मात्रै थिएँ ‘‘राँडीका छोरा किन समातिस् मलाई छोड्दे? तँलाई हरिया बाँसमा बाँधेर टुँ ऽऽ पार्दै लैजान्छु ” भन्न थाल्यो ऊ । फटाहा त्यसो भन्नुहुन्छ भन्दा ‘‘मैले तपाईंलाई भनेको होइन यसलाई भनेको ” भनेर मलाई देखाउँथ्यो । मान्छेको बराम लाग्थ्यो काईला बाजेको आँगन अघि । यस्तो लाग्थ्यो यो कुनै खालखालका जीवजन्तुहरू ल्याएर प्रदर्शनको लागि राखिएको एउटा चिडियाखाना हो । उपाय केही नलागे पछि भुईको धूलो उठाएर सबैलाई छरिदिन्थ्यो अनि आफ्नो टाउकोभरि धूलो हाल्थ्यो रिसले ।
कोही रुँदारुँदै प्राणै फुत्केलाजस्तो गर्थे बिचराहरू । जबर्दस्ती । जबर्दस्ती समाएर फुल्यायो , आँशु पुछिदियो अनि फकायो । बच्चा हो एकैछिन्मा फुल्याइहालिन्थ्यो । कोही पेन्टमै दिसा गरिदिने, कोही पेन्टमै पिशाब गरिदिने । यस्तै यस्तै बच्चाहरूको माझमा थिएँ म । साना नानीहरू कति आए कति गए मलाई सबैको ख्याल छैन पनि । सिँगाने नाकैभरि प्यात्त परेको पहेँलो सिँगान बोकेर आउनेदेखि साह्रै चिटिक्क परेर आउने सम्म । म बास्तवमा पुरुषोत्तम गौतम थिएँ कलेजको विद्यार्थी । यहाँ म भएँ गौतम सर । मेरो न्वारान भयो आफसे आफ ग्वालडुब्बाको बसाइ पछि । शायद दोस्रो वर्ष या तेस्रो वर्ष थियो होला स्कूल सुरु भएको । नर्सरीमा आउने बच्चा रुने, कराउने, लडिबुडी गर्ने नै हुन्थे प्रायजसो । आमाको काख छुटाएर , बाबुको साथ छुटाएर ल्याइएका नानीहरू थामिनसक्नुका हुन्थे धेरैजसो । आफ्नो घर र निश्चित छिमेकीको घर दलान ननाघेका नानीहरू ग्वालडुब्बा बजारको यो कुटीमा ल्याइपु-याउँदा बिचराहरूको सातै जान्थ्यो होला ।
तर एकदिन एउटी सानी नानी आई स्थानीय सरकारी स्कूलमा पढाउने शिक्षिका बिन्दु खनालसित । त्यो सानी नानी बेग्लै लाग्थी हेर्दै । बडो चंख थिई ऊ । चञ्चल, ठूलाठूला आँखा । उसको अनुहारमा निकै चमक थियो । मलाई नानीहरू हेर्ने बित्तिकै कस्तो खालको हुनसक्ला भन्ने सामान्य तबरमा थाहा हुन थालिसकेको थियो त्यो बेलासम्ममा । बिन्दु मिसले भन्नु भयो —“सर ! यो हाम्री दाइकी छोरी फर्मुला हो नर्सरीमा नाम लेखाउनु पर्ने ।” मैले फर्मुलालाई —“छोरी यता आऊ त ” भनेर बोलाएँ । ऊ सरासर म भएतिर आई । प्रायजसो पहिलो दिन स्कूल आउनेहरू रोएर, जोसँग आएका हुन्थे उनीहरूलाई नै च्याप्प समाएर छोड्दै नछोड्ने, बोलाउँदा आउँदै नआउने, जंगली स्वभावका हुन्थे । तर फर्मुला त अनौठो खालकी थिई मेरो लागि ।
साना साना नानीहरूलाई केही सिकाउनु ठट्टा होइन भन्ने लाग्छ मलाई । उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको ख्याल राखेर उनीहरूसँग व्यवहार गर्नु पर्छ । म तालिम प्राप्त शिक्षक थिइँन । ललितपुर बस्दा चापागाउँमा खुलेको कन्चन अ्रग्रेजी बोर्डिङ्ग स्कुलमा केही समय काम गरेको अनुभव थियो थोरै । साना साना नानीहरूलाई पढाउने शिक्षक थिएँ म । पढाउन थालेको केही समय पछि मलाई ब्रोङ्काइटिसले समात्यो । मैले काम गर्न नै सकिँन राम्ररी । त्यही भएर झापा हानिएको थिएँ म । मलाई अरू शिक्षण सम्बन्धी केही ज्ञान नै थिएन । म जानेर वा नजानेर मेरै ढङ्गले व्यवहार गर्थेँ बच्चाहरूसँग । न मलाई शिक्षाको सिद्धान्त नै थाहा थियो न अन्य अनुभव नै । तर पनि बाल मनोविज्ञानको एउटा किताब पढ्थें भगवती बिष्टको हिन्दी भाषामा लेखिएको । आलोकाँचो थिएँ भन्ने स्वीकार्नु पर्छ मैले । तर एउटा सत्यता के थियो भने म पढाइमा अति उत्सुक थिएँ , त्यति नै उत्सुक थिएँ शिक्षण पेशामा पनि । के गर्दा नानी बाबुहरूलाई राम्ररी सिकाउन सकिन्छ भन्ने खूब चासो लाग्थ्यो अनि सकेसम्म कोशिष गर्थेँ म । हुन त त्यो बेला हाम्रोतिर स्वाध्याय सामाग्रीको प्राचुर्यता भएको बेला थिएन । जे भए पनि म लगनको साथ काम गर्थेँ । म कुनै स्कूलको तलबी शिक्षकभन्दा पनि साना साना नानीहरूको पथप्रदर्शक हुँ भन्ने लाग्थ्यो मलाई । उनीहरूका खराब आदतहरू हटाएर असल आदतहरू निर्माण गर्नु, नाकनिकेहरूलाई खाना खाने बेलामा सम्झाउनु त्यति मात्रै होइन बुबा आमाका चुरोट बिँडी, खैनी खाने तथा मद्यपान गर्ने आदि आदत हटाउन सहयोग पुर्याउनु पनि थियो । मलाई लाग्थ्यो पढाउनु भनेको मात्रै बाह्रखरी सिकाउनु र ए बी सी डी सिकाउनु मात्र होइन । बच्चालाई नैतिकवान बनाई समाजको एक दर्बिलो खम्बा बनाउनु पनि हो । किताबी ज्ञानको अथाह भण्डार भएर पनि बच्चा नैतिकवान बन्न सकेन भने उसले हासिल गरेको ज्ञानको केही अर्थ छैन भन्ने ठान्थ्यो मेरो अलिअलि पढेको दिमागले । पढाउनु भनेको बच्चाको शारीरिक,मानसिक , बौद्धिक तथा नैतिक बिकास गराउनु पनि हो भन्ने विचारले नै अघि बढ्थेँ । जीवन एक अनुभवकै रुपमा भोग्दै थिएँ म । साना साना नानीहरू तिनीहरूको आफ्नै दुनियाँ अनि मेरो पनि आफ्नै दुनियाँ थियो । तिनीहरूको माझमा समय बितेको पत्तै हुँदैनथ्यो मलाई ।
फर्मुला छोरी मेरी साह्रै मिल्ने साथी बनी, अलिदिन जति बसी । मसँग धेरै कुरा गर्थी ऊ । मलाई थाहा भइसकेको थियो उसको आदत । हँसिली थिई ऊ । रुनेहरूलाई फर्मुला देखाएर सम्झाउन थालेको थिएँ म । हेर ! फर्मुला त रोएकी छैन भनेर । फर्मुला अरुलाई पनि किन रोएको भन्थी, अनि म त रोएकी छैन त भन्दै मलाई नै सहयोग गर्थी । रुनु हुँदैन त भन्दै अरुलाई फकाइदिन्थी । रुँदा रुँदै नानीहरु हाँस्न थाल्थे आँशु झरेकै आँखाबाट पनि । मलाई आनन्द लाग्थ्यो । नाटक गर्नु पर्थ्यो केटाकेटीका खुशीका लागि । मलाई लाग्छ साना नानीहरूसँग रमाउँदाको आनन्द दुनियाँका अरु केहीले पनि दिन सक्दैन मलाई ।
मैले ग्वालडुब्बामा पैसा कमाएर ठूलो मान्छे बनौँला, धनी बनौँल भनेर पनि पढाउन सुरु गरको थिईन मैले । कञ्चन अंग्रेजी बोर्डिङ्गमा पढाउँदा रमाइलै लागेको थियो साना साना नानीहरूको साथ त्यसैले ग्वालडुब्बामा स्कूल चलाउने कुरालाई स्वीकारेर म झरेको थिएँ । काम अरुले के भन्ला र केही पाइएला भनेर गर्ने पनि होइन भन्ने लाग्थ्यो मलाई । आफूलाई के सही लाग्थ्यो त्यही गर्थेँ म । एकदिन नर्सरीलाई पढाउँदै गर्दा फर्मुला छोरीलाई छोरी राम्रो लेख है भनेको थिएँ मैले । उसले त उल्टै पेन्सिल डेस्कमा पो राखिदिई । छोरी पेन्सिल समात लेख्नु पर्छ भन्थेँ म । ऊ गफ गर्न थाली मसँग उल्टै । मलाई थाहा छ साना नानीहरू साह्रै जिज्ञासु हुन्छन् । यस्ता यस्ता अनौठा प्रश्नहरू गर्छन् म ती सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिने सामर्थ्य राख्दिन । तिनीहरूको उत्सुकताको सीमै हुन्न जस्तो लाग्छ । म ठूला मान्छेको प्रश्नको जवाफ दिएर सन्तुष्ट पार्न सकूँला तर साना नानीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने ममा क्षमता, ताकत वा सामथ्र्य जे भनौ ममा छैन । एउटा पछि अर्को प्रश्नको ओइरो लगाउँछन् उनीहरू । त्यसैले मैले भनेको छु —“साना नानीहरूलाई सम्हाल्ने काम, पढाउने काम साह्रै कठिन हुन्छ । भविष्यमा जे जे बने पनि उसको यो बेला नै जग बस्ने बेला हो।“सर म त राम्रो लेख्छु । मैले राम्रो लेखेँ भनेँ नि मेरी आमा आउनुहुन्छ फर्केर । मेरी आमा ऊ माथि जानु भाको छ ” हातले इशारा गरेर उसले मलाई आकाशतिर देखाई । “अनि कि मेरी आमा त देउतीमाताको घर पो जानु भाको छ त थाहा छ तपाईंलाई? माथिबाट आमाले हेरिरहनु पो हुन्छ त मलाई सधैँ । मैले राम्रोसँग लेखेँ भने, पढेँ भने मेरी आमा खुशी भएर यहीँ आउनु हुन्छ रे ।"
मलाई थाहा भइसकेको छ फर्मुलाकी आमा यो दुनियाँमा हुनुहुन्न भनेर तर पनि कति अबोध छे फर्मुला छोरी । उसले मलाई भनिसकेकी छे आमा देउतीमाताको घर जानु भएको छ भनेर । म त ट्वाल्ल परेँछु । उसलाई हेरेको हेर्यै भएँछु । जब उसले भनी आमा फेरि फर्केर आउनुहुन्छ यहाँ, तब मैले सोधेको थिएँ फर्मुलालाई — “छोरी तिमीलाई कसले भनेको भनेर ?” “हाम्री हजुरआमाले सधैँ भन्नु हुन्छ सुत्नेबेलामा मलाई, थाहा छ सर?” कति अबोध छे ऊ!। आमा आउनुहोला भन्ने सम्झन्छे ऊ, उसले मतिर फर्किएर सोधीहाली, "आमा साँच्चै आउनु हन्छ सर?" भनेर।
म अक्क न बक्क भएँ । भक्कानो फुटेर आयो मेरो । मलाई तत्कालै डाँको छोडेर रुँ रुँ लाग्यो उसलाई अँगालेर । कति सरल छे ऊ । मानौँ उसले आफ्नी आमा गुमाएको महशुस नै छैन । मलाई खपिनसक्नु भयो । म अति भावुक बनेँछु । मेरा आँखा रसाएछन् फर्मुलाको अबोध चेहरा हेरेर अनि उसको कुरा सुनेर । मैले अर्कोतिर फर्किएर आँशु झारेँ अनि फेरि फर्किएँ फर्मुलातिर र हाँस्दै भनेँ —‘‘छोरी धेरै पढ्यौ , ज्ञानी बन्यौ भने तिम्री आमा पक्कै आउनुहुन्छ एकदिन फर्किएर । ” मैले फर्मुलालाई यसो भनिरहँदा आफैँलाई नराम्रो लाग्यो । मैले जानाजान झूटो बोल्नु प-यो उसको लागि । न म उसलाई सत्य भनेर उसको चित्त दुखाउन नै सक्थेँ, न चूप लागेर उसको चित्त बुझाउन नै सक्थेँ ।
ऊ कति खुशी थिई, उसको चेहराले बताइरहेको थियो । उसको अनुहारको त्यो प्राकृतिक खुशी सधै कायम रहोस् ,म चाहन्थेँ । तर फेरि म सम्झन्थेँ —एकदिन यस्तो पनि त आउला उसले आफैँले आमाको बारेमा बुझ्ली । आमा त कहिल्यै नफर्कने गरी सधैँका लागि उसलाई यहीँ छोडेर अर्कै लोकमा जानु भएको रहेछ भन्ने यथार्थ थाहा पाउली । त्यो दिन ऊ भन्ली—सारा संसार झुटैझुट रहेछ, सबै मान्छेहरू झुटा कुरामात्र गर्दारहेछन् । अनि उसको सम्झनामा रहेछ भने अझ भन्ली- अरु त अरु, त्यो बोर्डिङ्गको गौतम सर पनि एक नम्बरको झुट रहेछ । त्यसले त मैले राम्रो पढेर ज्ञानी भएँ भने फेरि आमा फर्किएर आउनुहुन्छ भनेको थियो नि भन्ली । अनि मलाई देखेर कसैले गौतम सर भनेको यही हो भनेर चिनाइदिएछ भने मलाई झुटो बोलेकोमा गर्नु गाली गर्ली ।
घर फिरेँ म स्कुल छुट्टी भएपछि । तर मेरो मन त्यसै त्यसै पोलिरह्यो । सबै आफ्ना धूनमा थिए अरु । तर म हराएको थिएँ कता कता । उही अबोध छोरी फर्मुलाको अबोध चेहरा, बिचित्र बिचित्रका प्रश्नहरू, अनौठा अनौठा कुराहरू, बोलिरहने उसको मृदु मुस्कान सहितको सजीव चेहरा आयो आँखा अघि बारबार । फर्मुला छोरीकी आमाको न अनुहार थाहा थियो मलाई न म चिन्थेँ नै । बस् वहाँको छोरीको एक समयको शिक्षकको नाताले फर्मुला छोरीको सफलताको कामना गर्न सक्छु अनि अपरिचित भाउजूको सम्झनामा श्रद्धाका दुईथोपा आँशु झार्दै वहाँको मृत आत्माले स्वर्गमा बास पाओस् भन्ने कामना गर्न सक्दछु ।
अनि अन्त्यमा फर्मुला छोरी ! जीवन यात्रामा तिमी कहाँ छ्यौ म भन्न सक्दिन । म जीवन यात्रा गर्दा गर्दै आज काठमाण्डूको पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन भन्ने स्कुलमा दादा दिदीहरूलाई पढाइरहेको छु अझै पनि । छोरी, मान्छेको मन तिम्रो जस्तै कोमल, भावना तिम्रो जस्तै पवित्र, सोचाइ तिम्रो जस्तै निश्च्छल भए कस्तो हुन्थ्यो होला यो संसार ? मलाई त बाबा तिमी जस्तै नानीहरू मात्रै मन पर्छ । ठूलाहरूको स्वार्थीहरूको संगतबाट म अघाएँ बाबा । तिमी धेरै पढ है छोरी स्वर्ग जानु भएकी आमालाई खुशी राख्न पनि । आमा जतिखेरै चम्किलो तारा बनेर तिमीलाई नै हेरिरहनु भएको छ । देउताको घरबाट सबै स्पष्ट देख्न सकिन्छ छोरी । स्वार्थी मान्छेको धमिलो मनले मात्र केही छुट्याउन सक्दैन । म तिम्रो गौतम सर, तिमी नर्सरी पढ्दाको, सधैँ ईश्वरसँग प्रार्थना गरिरहन्छु तिम्रो खुशीका लागि, तिम्रो उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि।
केहि दिन पहिला झापाका ओजोन सन्दीप भाइको मेल पाएँ। भाइ ब्लग-जगतमा प्रवेश गर्न उत्सुक र आतुर रहेछन् र सल्लाह/सुझावको लागि मलाई मेल गरेका रहेछन्। यसरी उत्सुक मान्छेहरुको मेल पाउनुले मलाई एकदमै खुशी बनाऊँछ। आफूसंगको जानकारी र अनुभव बाँड्न पाऊँदाको आनन्द र आत्मसन्तुष्टि बेग्लै हुन्छ। ब्लग-जगतमा पनि एकापसमा सिक्ने-सिकाउने कृया निरन्तर चलिरहेको हुन्छ, यथार्थमा ब्लग-जगतलाई जीवन्त बनाउने एउटा प्रमुख पक्ष हो यो।
सन्दीप भाइसंगको सम्पर्कले अर्को खुशीपनि थप्यो मेरो मनमा। आफूभन्दा २० वर्ष कान्छो नेपाली पुस्ताको सोचाई र आकांक्षाका बारेमा अलि-अलि जान्ने मौका मिल्यो। हुनत एउटा ब्यक्तिलाई हेरेर समग्र समूहको समग्र मूल्यांकन गर्न सकिँदैन तर सीमितनै भएपनि जान्न पाउनु राम्रै अवसर हो।
हामी बीच सात-आठ ईमेलहरु आदानप्रदान भए। सन्दीप भाइको जिज्ञासामा ब्लगमा के विषयमा कसरी लेख्दा राम्रो हुन्छ, डोमेन नेम किन लिने, कसरी लिने देखि 'ब्लग लेखेर कत्तिको शत्रु कमाउनुभएको छ?' भन्नेसम्मका जिज्ञासा थिए। 'शत्रु' वाला प्रसंग बाहेक अरु विषयमा सन्दीप भाइसंग भएका कुराकानीलाई संक्षेपमा लेख्न चाहन्छु आज। यो टाँसो मूलत: सन्दीप भाइजस्तै उत्साही संभावित ब्लगरहरुलाई लक्षित गरेर लेखिएको हो। नियमित ब्लग गरिरहेका साथीहरुलाई निरस लाग्न सक्छ, फेरि अरु ब्लगर साथीहरुले पनि यहि विषयमा लेखिसक्नुभएको छ। त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु। नेपाली ब्लग-जगतमा सदस्यहरु बढाउनका लागि बेला-बखत यस्ता टाँसोहरु लेखिनु जरुरी छ भन्ने मेरो मान्यता हो।
सन्दीप भाइजस्तै उत्साही संभावित ब्लगरलाई मेरो सल्लाह हो यो।
१)ब्लग किन गर्ने? ब्लगमा के पस्किने?
ब्लग शुरु गर्नुभन्दा पहिले आफू किन ब्लग गर्न लाग्दैछु भन्ने कुरामा यथेष्ट चिन्तन हुनु जरुरी छ। लहडमा वा अरुले ब्लग गरेको देखेर शुरु भएका ब्लगहरु त्यति लामो समय टिक्दैनन्। यात्रा कि थाल्दै-नथाल्नु, थालिसकेपछि निरन्तरता दिनुनै राम्रो हो। त्यसकारण ब्लगको एउटा उद्देश्य, एउटा मिसन हुनैपर्छ। आफ्नैलागि मात्र लेख्ने हो भने बेग्लै कुरो।
ब्लग शुरु गरिसकेपछि निरन्तरता दिन गाह्रो छ। केहि टाँसोसम्म बास्तवमा त्यति आत्मविश्वाश पनि आऊँदैन। त्यसैले आफूले कुन विषयलाई ब्लगको प्रमुख स्रोत बनाउने हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। ब्लग धेरै विषयमा लेखिने संकलनजस्तो पनि हुनसक्छ अथवा कुनै एउटा निश्चित विषयवस्तुमा मात्रै केन्द्रित पनि हुनसक्छ। जसरी जाँदा निरन्तर हुन सकिन्छ, त्यहि बाटो रोज्नुपर्छ। आफूले लक्ष गर्न चाहेका पाठकहरुको रुचि कस्तो हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि चिन्तन आवश्यक छ।
समसामयिक घटनामाथिको टिप्पणी, आफ्नो रुचिका कुरा-साहित्य, संगीत, यात्रा आदिको चर्चा, प्राविधिक विषय, साहित्य, बालसाहित्य, फोटोग्राफी, अडियो ब्लग, भिडियो ब्लग, पारिवारिक अनुभव, पाक-कला, ---विषय अनगिन्ती छन्। नेपाली ब्लग जगत एक हिसाबले 'साहित्य रोग'ले ग्रसित छ र यसमा अझै चाहिँदो विवधता आउन सकेको छैन।
२) ब्लगको भाषा
नेपाली, अंग्रेजी वा जुन भाषामा लेखेपनि पाठक सजिलै भेटिन्छन, मुख्य कुरा ब्लगको विषयवस्तुको स्तरीयताको हो। एउटै ब्लगमा कहिले नेपाली, कहिले अंग्रेजी नगर्ने सल्लाह दिन्छु म। यसले पाठकहरुलाई झिँजो लगाएको अनुभव छ मेरो (मेरो नितान्त ब्यक्तिगत अनुभव हो यो, अरु ब्लगर साथीहरुको अनुभव फरक हुनसक्छ)। दुबैमा लेख्ने मन छ भने बरु दुईटा ब्लग बनाए हुन्छ।
३) ब्लगर, वर्डप्रेस वा अरु
सबैमा आ-आफ्ना सबल र निर्बल पक्ष छन्। जुनबाट शुरु गरेपनि हुन्छ।
ब्लगको नाममा समाचार पस्किने ब्लगहरु बाहेक अरु ब्लगहरु, त्यसमा पनि ब्यक्तिगत रुपले चलाईएका ब्लगहरु, दैनिक अपडेट गर्न गाह्रो हुन्छ। दिनदिनै पस्किन सक्नेगरी खुराक जम्मा पार्न सकिन्छ भने धेरै राम्रो। ब्लगका दुई टाँसोहरुको बीचको अन्तराल सकेसम्म सधैं उत्तिकै राख्नु राम्रो हुन्छ। कहिले दिनदिनै नयाँ टाँसो राख्ने, कहिले भने १५-२० दिन हराउने गर्नुभन्दा हप्ताको एउटा टाँसो राख्ने तर नियमित रुपमा राख्ने गर्नु आवश्यक छ। त्यतिले पनि भ्याईन्न भने दुई हप्ता वा तीन हप्ताको अन्तराल पनि बनाउन सकिन्छ।
आफूसंग उपलब्ध समय र ब्लगको विषय हेरेर अन्तराल तय गरेपछि ब्लगको मूलमन्त्र "निरन्तरता, निरन्तरता र निरन्तरता"नै हो। ब्लगको स्तरीयताका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ तर निरन्तरतामात्रैले पनि धेरै सपार्छ ब्लगलाई।
- 'प्रचार-प्रसार' ले राजनीतिक गन्ध दिनसक्छ तर मेरो ध्येय त्यो होईन। एउटा नियमित ब्लगरले आफ्नो ब्लगको सकेसम्म धेरै प्रचार गरेको राम्रो। पूराना पाठकलाई अड्याईराख्न पस्किने सामग्री स्तरीय हुनु त अनिवार्य छँदैछ, नयाँ पाठकहरु थप्न प्रचार-प्रसार जरुरी छ। झन् नयाँ ब्लगरले त युद्ध स्तरमा प्रचार-प्रसार गरेको राम्रो। आफ्नो मेलिङ्ग लिष्टमा भएका सबैलाई कम्तिमा एकचोटि "मैले ब्लग शुरु गरेको छु, फुर्सद हुँदा पढेर प्रतिकृया दिनुहोला" भनेर ब्लगको ठेगाना सहित मेल गर्ने, फेसबुक वा आफू संलग्न कुनैपनि सामजिक संजालमा उपलब्ध सबै तरिका प्रयोग गर्ने, चिनजानका मान्छेसंग टेलिफोनमा कुराकानी हुँदा वा भेटमै पनि आफ्नो ब्लगको कुरा गर्ने-----कुनैपनि तरिका अपनाए हुन्छ। नितान्त नीजि मनोवाद बाहेक कुनै पनि विषयमा लेख्नु भनेको आफूबाहेक अरुले पनि पढुन् भनेरनै हो। हो, मान्छेलाई झर्को लाग्ने सीमासम्म भने पुग्नु हुँदैन, त्यसमा सचेत हुनै पर्छ। - ब्लग लिष्टहरु ब्लगको प्रचार-प्रसारको अर्का महत्वपूर्ण माध्यम हुन्। Nepali Bloggers लगायत अरु केहि साइटहरुले नेपाली ब्लग र ब्लगरहरुलाई सूचिकृत गरिरहेका छन्। नियमति रुपमा अपडेट हुने नेपाली ब्लगहरु HAMRO CIRCLE र नेपाली भाषाका ब्लगहरुमा पनि सूचिकृत छन्। नविनजीले Nepali Blog Updates भन्ने Google Widget विकास गर्नुभएको छ। ईण्टरनेटमा अरु सैयौं ब्लग लिष्टहरु, डाईरेक्ट्रीहरु छन् जहाँ आफ्नो ब्लग सूचिकृत गर्न सकिन्छ।
नेपाली ब्लगरहरुको एकापसी सम्पर्कलाई संगठित रुप दिनका लागि Nepali Bloggers भन्ने गुगल-ग्रुप पनि सकृय छ।
- ब्लगलाई परिचित र लोकप्रिय बनाउने अर्को महत्वपूर्ण माध्यम ब्लग आफैं हो, त्यसभित्रको अन्तर्कृया हो। अरुको ब्लग 'फलो' गर्ने, अरुको ब्लग पढेर प्रतिकृया दिने र लिंकहरु आदानप्रदान गर्ने काम साह्रै महत्वपूर्ण हुन्छ ब्लगलाई अगाडि बढाउन। अरुले आफ्नो ब्लग पढिदिउन् भन्ने चाहनेले आफूले पनि अरुको ब्लग पढ्नुपर्छ।
एउटा राम्रो टेम्प्लेटले निश्चयपनि ब्लगको सौन्दर्य बढाऊँछ तर टेम्प्लेटको झिलिमिलीका भरमै पाठकहरु बटुल्न र बाँधेर राख्न सकिन्न। ब्लगले पस्किने विषयवस्तुको स्तरीयतानै ब्लगको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो, टेम्प्लेटको साज-सज्जा त्यसपछिको कुरा हो।
बनिबनाऊ टेम्पलेटहरु पनि जतिपनि भेटिन्छन्, रुचि छ भने कुनै आधारभूत टेम्प्लेटबाट शुरु गरेर आफैं सिक्दै-त्यसलाई परिमार्जन गर्दै गएपनि हुन्छ।
७) डोमेन नेम
आफ्नै डोमेन नेममा ब्लग चलाऊँदा निश्चय पनि आनन्द आऊँछ। सबैभन्दा सजिलो बाटो भनेको Yahoo! Small Business वा Google बाट डोमेन नेम किनेर Blogger को Custom Domain Publishing सुविधा प्रयोग गर्नु हो (Wordpress मा पनि यस्तै सुविधा छ होला पक्का पनि।)
"हजारौं माईलको यात्रा एक पाईलोबाट शुरु हुन्छ।" भनेजस्तै शुरुवात आफैं महत्वपूर्ण कुरा हो, र निरन्तरता दिएका खण्डमा सिक्दै र सप्रिईँदै जानेमा कुनै शंका छैन।
आफ्नो ब्लग अनुभवका बारेमा अरु टाँसोहरुमा पनि केहि कुरा गरेको छु;
संगठन कि ई-मेल समूह
'कतै नजाने बाटो'को मेरो यात्रा
Some points from my-----
यस विषयमा दिलिपजीले "के तपाईँ पनि ब्लग चलाउन चाहनुहुन्छ?" भन्ने शिर्षकमा एउटा बिस्तृत टाँसो लेख्नुभएको छ र अरु सहयात्री ब्लगर साथीहरुले पनि धेरै कुरा लेख्नुभएको छ बेला-बेलामा। यहाँ प्राप्त हुने प्रतिकृयाहरुमा पनि अरु नयाँ जानकारी आउनेनै छ।
सन्दीप भाइको ब्लग वर्षात बीचको सूर्योदय को सफलताको शुभकामना!
र अन्त्यमा, नेपाली ब्लग जगतमा नयाँ पुस्ताको उपस्थिति अझ सशक्त हुँदै जानेछ भन्ने आशा र शुभकामनाका साथ यो टाँसोको बिट मार्न चाहन्छु
तपाईँको सप्ताहान्त सुखद् रहोस्।
आँखामा कालो पट्टी बाँधेका हुर्हुराऊँदा अगुल्टाहरु बस्ती पसेका छन्।
उनीहरु अब, सेता हात्तीलाई तर्साउने नाममा नाङ्ग्लाहरु प्वाल पार्नेछन्। राशका राश प्वाल परेका नाङ्ग्लाहरु थुप्रिनेछन् अब चोक-चोकमा। तर प्वाल परेका नाङ्ग्लाहरुको राश थुप्रिँदैमा सेता हात्तीहरुलाई केहि फरक पर्नेछैन, सेता हात्तीहरु उसै गरी ऊँघ्दै उग्राईरहनेछन्।
छिमेकीलाई तर्साउने नाममा उनीहरु अब खेलमा मग्न निर्दोष बच्चाहरुलाई सोत्तर बनाएर चुट्नेछन्। छिमेकीहरु कौशीमा बसेर राम-रमिता हेर्नेछन्। भाग्न सक्ने बच्चाहरु अब बस्ती छोडेर भाग्नेछन्, भाग्न नसक्नेहरु आतंकको सेपमा जिन्निएर हुर्किँदै-नहुर्की बूढा हुनेछन् र मर्नेछन्।
यसरी अब बस्तीमा स्वस्थ बच्चाहरुको खडेरी पर्नेछ।
यसरी अब बस्तीमा स्वस्थ मान्छेहरुको खडेरी पर्नेछ।
आँखामा कालो पट्टी बाँधेका हुर्हुराऊँदा अगुल्टाहरु बस्ती पसेका छन्। उनीहरुले बस्तीका सारा बाटाहरुमा, गोरेटो-डोरेटोमा ताल्चा लगाएको डकार छादेका छन्।
तर रातभरि बिरामी आमा कुरेर बसेकी सानीलाई त्यसको परवाह हुनेछैन। ऊ आफ्नी आमालाई खुवाउन बिहानको ताजा पानी भर्न गाग्री बोकेर पँधेरातिर जानेछे।
आफूले ठोकेको ताल्चा तोडेको निहुँमा अब उनीहरु सानीको टाउकोमा ढुंगा बजारेर सानीको टाउकोको अचार बनाउनेछन् र एकछिनपछि बस्तीतिर फर्केर भन्नेछन्; “सानीको टाउकोलाई हामीले अचार बनाएको होईन, घूसपैठ गरेको ढुंगाले हो। ढुंगा हाम्रो पार्टीको मान्छे होईन।"
बाटाघाटा, गोरेटो-डोरेटोमा ताल्चा लागेपनि सेता हात्तीहरुलाई फरक पर्नेछैन किनभने उनीहरुका आ-आफ्ना नीजि सुरुङ्ग छन्। तर हर्केसंग नीजि सुरुङ्ग छैन, ऊ आफ्नो र आफ्नाको भोक मार्ने जोहो गर्न, काम खोज्न निस्कनेछ।
आफूले ठोकेको ताल्चा तोडेको निहुँमा अब उनीहरु हर्केका हात-खुट्टामा खुँडा हान्नेछन् र उसलाई अधमरो बनाउने छन्। एकछिनपछि हर्केको रगतले रंगिएको खुँडा बस्तीलाई देखाऊँदै भन्नेछन्; “हर्केलाई हामीले काटेको होईन, खुँडाले काटेको हो। हामीले हाम्रो पार्टीबाट खुँडालाई निष्काशन गरिसकेका छौं।“
सन्तु खोलापरीको बस्तीमा मजदूरी गरेर घर फर्किरहेछ। आफ्नो बस्ती जाने बाटोमा ताल्चा लागेको देखेर छक्क पर्छ ऊ। तर त्यो उसकै बस्ती हो, यसैले ऊ आँट गरेर ताल्चा फोरेर अगाडि बढ्नेछ।
आँखामा कालो पट्टी बाँधेका अगुल्टाहरुले सन्तुलाई “अगाडि नबढ्! जताबाट आएको होस्, उतै जा!” भनेर हकार्नेछन्। सन्तु बिलखबन्दमा पर्नेछ, ऊ जताबाट आएको हो, त्यतै फर्किन सक्दैन किनभने त्यो उसको बस्ती होईन। ऊ “जे त पर्ला!” भनेर आफ्नै बस्तीतिर पाईला बढाउनेछ। आँखामा कालो पट्टी लगाएका अगुल्टाहरु सन्तुसंग रिसाउनेछन्, “हामीलाई अटेर गर्ने यो मु--- को हो?” भन्दै सन्तुलाई गोलीले उडाउनेछन्। यसरी उनीहरु सन्तुले बोकेर ल्याएको उसको परिवारको सपनाको पोकोको हत्या गर्नेछन्।
आँखामा कालो पट्टी बाँधेका अगुल्टाहरुले अनि बस्तीतिर फर्केर भन्नेछन्; “सन्तुलाई हामीले मारेको होईन। हाम्रो पार्टीको नीति त्यस्तो होईन। सन्तुलाई हाम्रो बन्दूकमा घूसपैठ गरेको गोलीले मारेको हो, गोली हाम्रो कार्यकर्ता होईन।“
आँखामा कालो पट्टी बाँधेका हुर्हुराऊँदा अगुल्टाहरु बस्ती पसेका छन्। उनीहरुले अब बस्तीलाई मर्ने आदेश दिनेछन्।
बस्तीले आफ्नो आदेश नमानेको झोंकमा उनीहरु अब पूरै बस्तीमा आगलागी गर्नेछन् र यन्त्रवत एकचोटि भन्दिनेछन्; “आगो हाम्रो नीति होईन, आगलागी हाम्रो नीति होईन, यो सब आगोले गरेको हो। आगो हाम्रो पार्टीको होईन।“
यसरी आँखामा कालो पट्टी बाँधेका हुर्हुराऊँदा अगुल्टाहरुले “आगलागी हाम्रो नीति होईन—“ भन्नेछन्।
र एकछिनपछि; बस्तीको लाशमाथि उभिएर, बस्तीको खरानीको राशमाथि उभिएर “क्रान्ति सम्पन्न भएको” भोज खानेछन्।
भोजको पृष्ठभूमिमा बज्न मूर्दा शान्तिको सन्नाटा बाहेक केहि पनि बाँकी हुनेछैन।
मान्छेहरु हो, सावधान! आँखामा कालो पट्टी लगाएका हुर्हुराऊँदा अगुल्टाहरु बस्ती पसेका छन्।